के फरक छ स्नातकोतर र एस एल सी परीक्षामा ?
- देवीराम आचार्य अहिले एस एल सी परीक्षा चलिचरहेको छ । पत्रपत्रिकामा चिट चोराउदै गरेका निरीक्षक निश्कासनमा परेको देखि चिट चोर्ने विद्यार्थी र केन्द्राध्यक्षहरु कारवाहीमा परेका समाचार छापिएका छन् भने ठू...
सामुदायिक शिक्षा : विकास र सम्भावना
- भानु पराजुली राष्ट्रको प्रगतिको आधार त्यस देशका नागरिकले प्राप्त गर्ने शिक्षाको स्तरले निर्धारण गर्दछ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षाको आमुल विकासको लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति र नीति कार्यन्वयनको...
एसएलसीलाई अनावश्यक महत्व !
- एडु खबर टिप्पणी सरकारले तहगत संरचना बदलेर कक्षा १२ सम्मलाई विद्यलाय तह घोषणा गरिसक्दा पनि आम सरोकारवालालाई भने एसएलसीको धङ्धङीले छाडेको छैन । विद्यालयको एउटा कक्षाको अन्तिम परीक्षा भन्दा बढी महत्व...
शिक्षा मन्त्रीको “पढाउने” मोह !
- अनमोलमणि पौडेल शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले हप्तामा एक दिन कुनै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने योजना सार्वजानिक गरेकी छिन् । त्यसको सुरुवात धनुषा जिल्लाको जनकपुरबाट भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस...
कस्तो हुनुपर्छ संघीय शिक्षा
- डा. विद्यानाथ कोइराला संघीयताको सन्दर्भ : जनताले सेवा खोजे । सुनिश्चित सेवा । काठमाडौंका पूर्व राजाले घरदैलो सेवा दिए । जनताको ध्वाँसीको घुवा हेरेर । हिमाली जातीय राजाले किल्लाभित्र अरुको प्रवेश रोक...
- अनमोलमणि पौडेल विश्वविद्यालय उत्तीर्णहरुमा पनि सिर्जनात्मक क्षमता भेटिन्न । सिद्धान्तका कुरा जाने पनि व्यवहारिक ज्ञान नेपालको शिक्षा प्रणालीले दिएको छैन । शिक्षाविद्हरुका शब्दमा ‘समालोचनात्मक विज्ञा...